Talooyin Van Astalt: Hoe U Spam-Bots Kunt Joojiya Van Het Verstoren Van Uw Analytics-Verwijzingsinformatie
Waxaad bilowday inaad ogaato kororka gaadiidka gudbinta ee mashiinka falanqaynta ee mashiinka raadinta iyo Hooray! Waxaad ku faraxsan tahay sababtoo ah qof ayaa isku xiraya oo gujinaya. Laakiin imtixaanka ugu dhow, waxaad ogaataa in aysan ahayn gaadiidka sharciga ah. Dhab ahaantii, waxaad tahay dhibbanaha ugu dambeeyay ee spam u gudbinta, nooc ka mid ah spamka oo loogu talagalay makiinadaha raadinta.
Haddii lagugu dhufto qulqulooyinkaas, waxaad u baahan tahay inaad hor istaagto sida ugu dhakhsaha badan. Alexander Peresunko, maamulaha guulaha macaamiisha ee Semef , wuxuu sharxayaa sida loo helo xog dhab ah oo laga helo falanqaynta - curso fotografia digital reflex nikon.
Waxaad u baahan tahay inaad maskaxda ku hayso in qofna uusan weydiin bots buugta si aad u booqato goobtaada. Iyadoo ay ku jiraan boggaaga, waxay haysanayaan qadaro badan oo ah khayraadka loogu talagalay dadka isticmaala sharciga. Natiijo ahaan, booqdayaasha sharciga ah waxay ku wareersan yihiin marka ay isku dayayaan inay galaan boggaaga oo aad eegto meelo kale. Intaa waxaa dheer, spammers marna marna wax wanaagsan maahan mar kasta oo ay soo wacaan.
Si aad u ogaatid shabakadaha spam ee jiheeyaha, waxaad u baahan tahay inaad aqoonsato qofka ka dambeeya. Habka caadiga ah waa isticmaalka WHOIS.net. Liisaska spammers caadi ah waxaa ka mid ah:
Ilovevitaly.com (iyo kala duwanaanshaha TLD kala duwan)
Darodar.com iyo subdomains kale ee la xiriira
Hadda, waxaad ka fekereysaa sababta ay spammers ugu dadaalaan si ay u tarxiilaan webka. Spammar kala duwan ayaa ku lug leh waxqabadyada hoosaadka leh sababo kala duwan.
Halkan waxaa ku yaal qaar ka mid ah spamka ugu sarreeya iyo sababaha ay u sameeyaan.
Tani waa mid ka mid ah spammers ugu xun ee waqtiga oo dhan. Botigu wuxuu adeegsadaa spam u gudbinta si loo abuuro hogaamiyaasha..Muxuu meeshan bixiyaa? Spam bogga. Asal ahaan, waxaa jira websaydhiyaal bixiya bogga si ay u sameeyaan spam webka si loo abuuro raadad. Ben Sykes waa qofka ka danbeeya domainka spamming. Wuxu ku dhiiri galinayaa inuu ku muujiyo xogta WHOIS.
Dhaqaale, darodar.com, iyo ilovevitaly.com
Goobahaasi waxay leeyihiin hal arrin oo maskaxda ku haysa: in lagu wado gawaarida goobo gaar ah sida eBay ama AliExpress.com.
Joojinta boodboodka khatarta ah
Habka ugu fiican ee looga ilaalin karo bots waa iyada oo xannibaya iyada oo loo marayo faylka .htaccess ee diiwaanka domain ee domain. Si taas loo sameeyo, waa inaad nuqul ka sameysaa oo aad ku dhejisaa koodh gaar ah faylka faylka .htaccess. Farsamadani ma aha oo kaliya in ay joojiso spammers in ay faragaliyaan qalabka falanqaynta, laakiin sidoo kale waxay ku dhejisaa qoryaha mar kasta oo ay isku dayaan in ay ku dhuftaan server.
Ka hor inta aadan sameynin isbedelka faylka faylka ah ee faylkaaga, waxaa muhiim ah in la ogaado in tani ay tahay foorma lagu go'aamiyo sida ay u shaqeyso serverkaaga. Haddii aad qalad sameyso inta aad faylka geyneysid feylka, waxay faragelin doontaa shaqeynta goobta oo dhan. Si looga hortago in tan dhacdo, tixgelin inaad taageerto boggaaga ka hor intaadan sameynin isbedelka faylka.
Isticmaalida habka kor ku xusan ma aha in laga takhaluso dhammaan spamka. Inkastoo ay kaa difaaceyso iskudhacyada mustaqbalka ee mustaqbalka, ma dhicin burburka hore loo sameeyay goobta. Si aad uga takhalusto macluumaadka taariikhiga ah iyo ka caawinta shaandheynta boodhka spam ee ka imanaya gobollo gaar ah mustaqbalka, ka feker inaad sameysato falanqaynta falanqaynta.
Isticmaalida WordPress si aad u sii dayso spamka
Waxaad sidoo kale dooran kartaa inaad isticmaasho plug-ka WordPress ee Wp-Ban si aad u ilaaliso dadka aan caddaalad ahayn. Fidinta ayaa kuu sahleysaa in aad liis gareysatid IP, kala duwanaanta IP, wakiilka user, URL gudbiyaha iyo wakiilka isticmaalaha laga bilaabo galitaanka WordPress-gaaga. Isticmaalida habkan waa bedel ku habboon ee dadka ku jira websadaha kuwaas oo aan ku raaxaysaneynin in ay sameeyaan faylasha faylka .htaccess domain.
Xayaysiiska Spam waxay saameynayaan xayeysiiska server-ka iyo sidoo kale ammaanka, macluumaadka falanqaynta ee khalkhalka by kiciya dadka isticmaala sharciga iyo dadaalka suuq-geynta suuqa. On a site weyn, 500 hits bilood ma beddeli karto wax badan. Laakiin haddii tani ay dhacdo goobta goobta dukaanka maxaliga ah, falanqaynta socodka sharciyeynta ah ayaa noqda hawl qabow. Taasi waa sababta ay u bixiso falanqaynta khabiir takhasus leh waa hab wax ku ool ah oo looga hortagi karo xogta jahwareerka iyo dadaalka shirkadda.